Isetshenziselwa ukufakwa komoya, ukushisa, amanzi ahlanzekile, ukwelashwa kwamanzi, ukupholisa nokuqinisa amakhaza, ukusakazwa kuketshezi, kanye namanzi abandayo angonakalisi nokuhamba kwamanzi ashisayo emkhakheni wokuphakelwa kwamanzi, ukucindezelwa nokunisela. Ukuncibilika okuqinile kuketshezi kuyinto, ivolumu yayo ayidluli u-0.1% wevolumu yeyunithi, usayizi wezinhlayiyana <0.2mm.
Iphampu Yokuphakela Ye-Boiler ye-DG / ZDG
I-DG chungechunge ehlukaniswe ipompo ye-centrifugal centre isebenzisa amabhawodi wokungezwani ukuxhuma itheku lamanzi, isigaba esiphakathi nendawo yesitolo kumkhiqizo wonke. Isetshenziswa emanzini okondla ama-boiler nakwamanye amanzi ahlanzekile anezinga lokushisa eliphezulu. Lolu chungechunge lunezinhlobo eziningi zemikhiqizo, ngakho-ke inezinhlobo eziningi zezinhlelo zokusebenza. Futhi, inokusebenza okungcono nokusebenza kahle okuphezulu kunezinga elijwayelekile.
Imodeli ye-KQDP / KQDQ ngamaphampu we-booster ama-multi-stage. Ukonga amandla, ukuvikelwa kwemvelo, okuphephile nokwethembekile kuyizinzuzo zayo eziyinhloko. Ingadlulisa izinhlobo ezahlukahlukene zoketshezi, futhi ingasetshenziswa ekunikezelweni kwamanzi, ukucindezelwa kwezimboni, ukuthuthwa kwezimboni okuhambisa amanzi, ukusakazwa komoya, ukuchelela, njll. I-KQDP ingasetshenziswa ezimweni ezingamanzi ezingonakalisi, i-KQDQ ingasetshenziswa kuketshezi olubuthakathaka izimo.
Ukuphakelwa kwamanzi okuphezulu, ukwakha ukuvikela umlilo, ukujikeleza kwamanzi okuhambisa umoya ophakathi nendawo, Ukuhambisa kwamanzi ukuhambisa uhlelo lobunjiniyela, Ukujikeleza kwamanzi okupholisa, Ukuhambisa amanzi we-Boiler, ukuhanjiswa kwamanzi kwe-Industrial kanye ne-drainage, Irrigation, izitshalo zamanzi, izitshalo zamaphepha, izitshalo zamandla, ezishisayo izitshalo zamandla, izitshalo zensimbi, izitshalo zamakhemikhali, amaphrojekthi wokonga amanzi, ukulethwa kwamanzi ezindaweni zokunisela, njalonjalo.
I-KZA / KZE / KCZ Petrochemical Pump